Ruushka 26 qof ku dilay Suuriya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Ruushka 26 qof ku dilay Suuriya
Ruushka 26 qof ku dilay Suuriya
Dowladda Ruushka ayaa lagu eedeeyay inay ka dambaysay dilka 26 qof oo carruur ay ku jiraan oo lagu dilay deegaanka Xaas ee dalka Suuriya ka dib duqayn ka dhacday wadankaasi.
Ugu yaraan 26 qof ayaa geeriyootay ka dib markii diyaaradaha dagaalka dalka Ruushka ay garaaceen Iskuulo carruur ay dhigtaan oo ku yaala deegaannada ku teedsan Magaalada Waqooyiga wadankaasi ku taala ee Idlib, waxaa sidaasi sheegay guddiga arrimaha Xuquuqda Aadanaha ee fadhigiisu yahay wadanka Ingiriiska.
Vitaly Churkin, Safiirka Ruushka ee QM ayaa sheegay in waxa ka dhacay Xaas ay ahaayeen “Fal bahaknimo ah”.
“Waa ay fududahay in la yirahdo maya. Waxaan rajaynayaa in dowladayda aysan ka dambaynin. Waxaan ahay qof mas’uul ah waan arki doonaa waxaa ay ka tirahdo Wasaaraddeena Gaashaandhigga” ayuu yiri Safiirka Ruushka.
Duqaynta ayaa dhacday 11:30am (08:30 GMT) maalintii shalay sida wakaaladda wararka AFP ay sheegeen warbaahin mucaaradku ay leeyihiin ee ka howlgasha Magaalada Idlib.
In ka badan 300,000 oo qof ayaa ku geeriyooday dalka Suuriya Malaayiina waa ay ka barakaceen ka tan iyo bishii Maarso sanadkii 2013 kii, xiligaasi oo ay billaabatay colaadda Suuriya.
Colaadda wadankasi oo ay isku hardinayaan Quwado shasheeye ayaa maalinba maalinta ka dambaysa waxaa isa soo taraya geerida dadka shacabka ah.
Magaalada Xalab/ Aleppo oo ah magaalada ugu wayn wadanka Suuriya waxaa ka taagan xaaladii Bani’aadanimo tii ugu xumayd, sida QM laga soo xigtay.
Dhanka bari ee Magaalada waxaa maamula kooxaha mucaaradka, halkaasi oo ay ku nool-yihiin Kumanaan dad ah oo halkaasi ku go’doonsan.
Magaalooyinka waa-wayn ee wadanka, sida Dimishaq, Daraya, Xoms, Xama Palmyra iyo qayb wayn oo Xalab ah waxaa Maamusha dowladda Suuriya.
Halkan waxaa kaaga muuqanaya sida wadankaasi oo idil loo kala maamulo, qaybta guduudan waxaa maamusha dowladda, qaybta Jaalaha ah waxaa maamula Kurdiyiinta, qaybta Madow waxaa maamula Kooxda Daacish halka inta soo hartayna ay maamulaan mucaaradka iyo Jabhadda Fatax al Shaam.
Previous articleYuusuf Dabageed oo xilka laga qaaday
Next articleSoomaaaliya oo ka mid noqotay Ururka IORA